China 3-Amino-5-mercapto-1, 2, 4-triazole ifektri kanye nabaphakeli | Ukwaziswa okusha kwe-Hailun
Igama lomkhiqizo: I-3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol; 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol; I-ATSA
Isisindo Yamamolekhula: 116.14
Ukubukeka nezakhiwo: impuphu emhlophe empunga
Ubuningi: 2.09 g / cm3
Iphuzu lokuncibilika: > 300 ° C (kuvuliwe)
Iphoyinti le-Flash: 75.5 ° C
Ingcindezi umusi: 0.312mmhg ngo-25 ° C
Sebenzisa: Njengemithi yokwelapha kanye ne-pesticide, Ingasetshenziswa njengesengezo se-ballpoint
ipeni uyinki, igrisi kanye ne-antioxidant
impuphu emhlophe noma empunga
Uma i-3-amino-5-mercapto-1,2 ihogelwe, i-4-triazole, sicela uhambise isiguli emoyeni omusha; uma kwenzeka uthintana nesikhumba, susa izingubo ezingcolile bese ugeza isikhumba kahle ngamanzi anensipho namanzi. Uma uzizwa ungakhululekile, funa iseluleko sezokwelapha; uma uthinta iso ngokusobala, hlukanisa amajwabu amehlo, ugeze ngamanzi agelezayo noma usawoti ojwayelekile, futhi ufune usizo lwezokwelapha ngokushesha; uma udliwe, gwinya ngokushesha, ungakhali ukuhlanza, futhi funa usizo lwezokwelapha ngokushesha.
Isetshenziselwa ukulungisa isixazululo sokuhlanza isithombe
Enkambisweni yokukhiqiza ejwayelekile ye-LED kanye ne-semiconductor, imaski ye-photoresist yakhiwa ngaphezulu kwezinye izinto, futhi iphethini idluliswa ngemuva kokuvezwa. Ngemuva kokuthola iphethini edingekayo, i-photoresist eyinsalela idinga ukukhunyulwa ngaphambi kwenqubo elandelayo. Kule nqubo, kuyadingeka ukuthi isuse ngokuphelele i-photoresist engadingekile ngaphandle kokonakalisa noma iyiphi i-substrate. Njengamanje, isixazululo sokuhlanza isithombe sakhiwe ikakhulukazi nge-polar solvent organic, alkali eqinile kanye / noma namanzi, njll. .
Uhlobo olusha lwesisombululo se-photoresist yokuhlanza selwakhiwe, okuyi-detergent engenawo-aqueous low etching. Iqukethe: i-alcohol amine, i-3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole ne-cosolvent. Lolu hlobo lwe-photoresist yokuhlanza isisombululo lungasetshenziswa ukususa i-photoresist ku-LED naku-semiconductor. Ngesikhathi esifanayo, ayinakho ukuhlaselwa kwe-substrate, njenge-aluminium yensimbi. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lunokumelana namandla kwamanzi futhi lwandisa ukusebenza kwewindi lalo. Inethemba elihle lokusebenzisa emkhakheni wokuhlanza i-LED kanye ne-semiconductor chip.
Langaphambilini I-3-Amino-1, 2, 4-triazole-5-carboxylic acid
Olandelayo: I-Aminoguanidine Bicarbonate